तपाईले हेडफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता रोग लाग्ने खतरा !Homeस्वास्थ्यतपाईले हेडफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता रोग लाग्ने खतरा ! | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
Home स्वास्थ्य तपाईले हेडफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता रोग लाग्ने खतरा !Homeस्वास्थ्यतपाईले हेडफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता रोग लाग्ने खतरा !
on: २०७६ श्रावण १९, आईतवार १३:२६ In: स्वास्थ्य
काठमाडौं – यदि तपाईले खाली समयमा कानमा हेडफोन लगाएर घण्टौंसम्म गीतहरु सुन्नुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस् । घण्टौंसम्म कानमा हेडफोन लगाएर गीत सुन्दा विभिन्न प्रकारको रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ । तपाई/हाम्रो साथीको रुपमा प्रयोग गरिने हेडफोन दुश्मन जस्तै हो । हेडफोनको प्रयोग गर्दा कानमा मात्रै समस्या उत्पन्न हुँदैन, अन्य विभिन्न रोग लाग्ने खतरा समेत हुन्छ ।
यदि यी समस्याहरुबाट तपाई पनि बच्न चाहनुहुन्छ भने आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र हेडफोनको प्रयोग गर्नुस् । हेडफोनको प्रयोग गर्दा राम्रो क्वालिटीको मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । सानो डेसिबलमा मात्र सुन्नुहोस् ।